In kabadan kun ciyaartoy oo Ruush ah oo "isticmaalay" dawooyin mamnuuc ah - BBC Somali
Image caption Richard McLaren oo ah ninka dhexe ayaa soo saaray warbixintan cusub
Inkabadan 1000 ciyaartoy oo Ruush ah ayaa ka faa'iidaysatay oo isticmaalay dawooyinka awoodda jirka kordhiya oo mamnuuc ah oo ay dawladoodu gacan ka siisay.
Arrintan ayaa faahfaahin ku sii dartay warbixintii la soo saaray bishii todobaad ee sanadkan, iyadoo lagu tilmaamay " arrin ay dawladdu si rasmi ah uga dambaysay" oo sirdoonka Ruushkuna uu qayb ka ahaa.
Waxay sheegeen in ciyaaryahanadu aysan kaligood ka dambaynin arrintan balse ay qayb ka ahaayeen.
Bare sare Richard McLaren oo warbixintan soo saaray ayna magacawday hay'adda ka hortaga dawooyinka awoodda jirka kordhiya ee caalamka ayaa sheegay in isticmaalka dawooyinka awoodda jirka kordhiya ay u dhacday heer aan la qiyaasi karin.
Ruushka oo ka hadlay eedda ka dhanka ah ciyaartooydiisa